जर्मन शेयर बजार Bitcoin उत्पादनहरु सुरु ठान्नुहुन्छ
जर्मन Boerse, को फ्रैंकफर्ट स्टक एक्सचेन्ज को मालिक, cryptocurrency उत्पादनहरु भेटी विचार छ, एक रिपोर्ट अनुसार.
बुधबार लन्डन मा एक उद्योग घटना मा बोल्ने, जेफरी Tessler, ग्राहकहरु को दृढ टाउको, उत्पादन र कोर बजार भने:
“हामी यो काम मा गहिरो हो।”
अमेरिकी अवैध Bitcoin मूल्य हेरफेर को एक छानबिन सुरु
को न्याय विभाग अवैध व्यापार मा एक अनुसन्धान खोलेको छ, व्यापारीहरु criminally Bitcoin को मूल्य manipulating छन् विशेष कि, यसबारे परिचित चार मान्छे अनुसार.
संघीय अभियोजन पक्ष को कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग आयोग संग काम गर्दै, Bitcoin बाँधिएको डेरिवेटिव निरीक्षण एक वित्तीय नियामक.
को न्याय विभाग केन्द्रित छ भन्ने अवैध रणनीति spoofing र धो व्यापार समावेश, जो मूल्यहरु असर गर्न सक्छन् भन्ने अवैध अभ्यासहरू छन्. spoofing मा, एक व्यापारी आदेश पेश र त्यसपछि तिनीहरूलाई रद्द गरेपछि मूल्य एक इच्छित दिशा मा सार्न.
धो ट्रेडों पनि मा डुबुल्की मार्न अन्य lures कि बजार माग गलत छाप दिन आफ्नो आत्म साथ एक cheater व्यापार समावेश.
यी नियामकहरु वायदा र equities बजार बाहिर उखेल्ने गर्न प्रयास वर्ष बिताएको धोखा को प्रकारका छन्.
थाई बैंक blockchain प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार पूरा
थाईल्याण्ड गरेको Krungsri बैंक सफलतापूर्वक पार-सीमा कारोबार सञ्चालन “सेकेन्ड को एक मामला मा” संग सिंगापुर मा एक बैंक blockchain प्रयोग.
भविष्यमा यो प्रविधि प्रयोग गरेर सिंगापुर बैंक अनुमति दिन्छ, मित्सुबिशी, र संभाव्यतः अन्य कम्पनीहरु “थप यसको लिक्विडिटी व्यवस्थापन दक्षता सुधार र आफ्नो लागत कम” बैंक भने.
पहिलो गुप्त भ्काडी कोष अष्ट्रेलिया मा शुरू
अष्ट्रेलिया गरेको हरेक पूंजी खुद्रा लगानीकर्ताले लागि देशको पहिलो cryptocurrency-केन्द्रित भ्काडी कोष शुरू भएको छ.
टम Surman, कम्पनी अष्ट्रेलिया आधारित लगानीको व्यवस्थापन सह-संस्थापक र निर्देशक, भने:
“हामी cryptocurrency र blockchain प्रविधि हरेक अष्ट्रेलियन लागि अत्याधुनिक लगानी उपलब्ध बनाउन पहिलो खुद्रा धन को एक हुन गर्व हुनुहुन्छ। "
Surman अनुसार, जबकि धेरै आस्ट्रेलियाई cryptocurrencies लगानी गर्न खोजिरहेको, प्राविधिक व्यावहारिक ज्ञान को कमी डिजिटल मुद्रा पानी मा डाइभिङ तिनीहरूलाई को भन्दा रोकन छ.
7nm Bitcoin खान बाहिर रोल जापानी प्रविधी विशाल GMO
जापानी आईटी विशाल GMO इन्टरनेट यस वर्ष पछि 7nm चिप्स मा आधारित बाहिर Bitcoin खानी उपकरण रोल सेट गरिएको छ.
फर्म यसलाई ठूलो उत्पादन संग जुन6मा नयाँ B2 खान सुरु गरिएको छ चाँडै पछ्याउन भन्नुभयो, र शिपमेन्टहरू अक्टोबर मा सुरु.
घोषणा उपकरण ह्याशिङ शक्ति को उच्च-स्तर कम बिजुली माग संग प्रदान गर्नुपर्छ भन्नुभयो.
कोइनबेस प्राप्त गुप्त विनिमय Paradex & अमेरिकी बाहिर सेवाहरू प्रदान गर्न योजना
कोइनबेस, अमेरिकामा सबै भन्दा ठूलो गुप्त विनिमय मंच, प्राप्त decentralized विनिमय मंच Paradex छ.
Paradex प्रयोगकर्ताहरूका बरु कोइनबेस जस्तै केंद्रीकृत सेवाहरू प्रयोग भन्दा cryptos आफ्नो पर्स सिधै व्यापार गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ एक साथीहरूको-सहकर्मी सेवा छ, मिथुन, आदि. यसरी, प्रयोगकर्ता आफ्नो टोकनहरू र फिएट राजधानी पूर्ण custodial अधिकार.
कोइनबेस केही संवर्द्धन प्रविधिलाई गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका को बाहिर ग्राहकहरु गर्न Paradex सेवाहरू बनाउन र सुरु गर्न योजना.
प्रमुख चेक ऊर्जा कम्पनी Bitcoin भुक्तानी स्वीकार गर्न
एक चेक गणतन्त्र मा सबै भन्दा ठूलो प्राकृतिक ग्याँस कम्पनीहरु को, प्राग ग्याँस, अर्को महिना Bitcoin स्वीकार गर्न योजना घोषणा गरेको छ.
ऊर्जा कम्पनी एक कदम लिन उद्योग मा मात्र कम्पनी हो.
हाल, प्राग ग्याँस बिजुली आपूर्ति भन्दा बढी 420,000 ग्याँस संग ग्राहकहरु.
Blockchain समाचार 11 जनवरी 201...
पूर्व-वित्तीय नियामक: I wish...
Litecoin - हुनेछ 2019 Be A Huge...
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 23.05.2018
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 25.05.2018